मलेसिया सरकारले गर्यो बिदेशी कामदारलाई यस्तो आवहान, नमाने समस्या हुने ! - ramechhapkhabar.com
मलेसिया सरकारले गर्यो बिदेशी कामदारलाई यस्तो आवहान, नमाने समस्या हुने !
मलेसिया फेरि पनि एउटा अवसर को सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सबैलाई सुझाव सहित अनुरोध गरेको हो। मलेसिया मा रहेको नेपाली दूतावास ले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक लाई गैर कानुनी अर्थात्‘अनडकु’मण्टेड’भएर नबस्न आग्रह गरेको छ । मलेसियाको सरकारले त्यहाँ गैर कानुनी भएर रहेका आ”प्रवासी श्रमिक लाई जरिवाना तिरेर आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न मौका दिएको छ । अनडकुबमेण्टेड हुँदा नेपाली श्रमिक जेल पर्ने गरेको पाइए को भन्दै समयमै मलेसिया सरकारले प्रदान गरेको
अवसर को फाइदा उठाइ आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न दूतावास ले आग्रह गरेको हो । अहिले अवै’धानिक भएकाहरुलाई मलेसियाको सरकारले डिसेम्बर अन्तिम सम्म घर फर्किनको लागि रिक्या’लिब्रेशन अवधि थप गरेको छ । रिक्यालिब्रेशन कार्यक्रम अन्तर्गत मलेसियाले गैर कानुनी श्रमिकलाई दुई अवसर दिएको छ ।
पहिलो निश्चित शुल्क तिरेर स्वदेश फर्कन पाइन्छ भने दोस्रो चाहिँ पुनः मलेसिया मा आफ्नो कागजात सच्याउँदै कानुनी रूपमा कामहरु गर्न पनि पाइन्छ ।त्यसको लागि एक सय ६० मलेसियन रिंगिट राजस्व तिरेर दूतावासमा आइ ट्राभल
डकुमेण्ट बनाउनुपर्छ । ट्राभल डकुमेण्ट दूतावासले दुई दिनमा उपलब्ध गरा”उँछ त्यसपछि ट्राभल डकु’मेण्ट, टिकेट र ७२ घण्टा को पीसी आरको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर केएलआईए काउण्टर बाट चेकआउट मेमो लिएर नेपाल फर्किन सकिन्छ ।
पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएको खण्डमा अब नेपाल फर्किन पनि नपाइने पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।यस्तै मलेसिया सरकारले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली पाँच देशलाई खुल्ला गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीको लागि अथवा नेपालबाट मलेसियामा श्रमिक लैजनाको लागि खुला नगरे को पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।
असोज मलेसिया फेरि पनि एउटा अ‘वसर को स”दुप“योग गर्न आग्रह गरेको छ। सबैलाई सुझाव सहित अनुरोध गरेको हो।मलेसिया मा रहेको नेपाली दूतावास ले त्यहाँ रहे का नेपाली श्रमिक लाई गैर कानुनी अर्थात् ‘अनडकु’मण्टेड’भएर नबस्न आग्रह गरेको छ ।मलेसियाको सरकारले त्यहाँ गैर कानुनी भएर रहेका आ”प्रवासी श्रमिक लाई जरि’वाना तिरेर आफ्नो कानुनी अवस्था सु’धार्न मौका दिएको छ ।
अनडकु’मेण्टेड हुँदा नेपाली श्रमिक जेल पर्ने गरेको पाइए को भन्दै समयमै मलेसिया सरकारले प्रदान गरेको अवसर को फाइदा उठाइ आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न दूतावास ले आग्रह गरेको हो । अहिले अवैधानिक भएकाहरुलाई मलेसियाको सरकारले डिसेम्बर अन्तिम सम्म घर फर्किनको लागि रिक्या’लिब्रेशन अवधि थप गरेको छ ।